Roborock S7: Nadiifinta dhamaadka-sare hadda leh xoqida ultrasonic | War gadget
Roborock S7: Nadiifinta dhamaadka-sare hadda leh xoqida ultrasonic
Robot vacuum nadiifiyeyaasha ayaa ku koray cabir ahaan iyo awood ahaanba waqti ka dib, taas oo ku bilaabatay wax soo saar xoogaa shaki gelinaya wax qabadkiisa, waxay noqotay wax soo saar awood u leh inay nolosheena u sahlanaato, gaar ahaan markay tahay nooca. - Roborock, takhasus gaar ah u leh robotyo caqli sare leh.
Nala soo baar annaga waxa cusub oo dhan iyo haddii farqiga u dhexeeya nadiifiyaha nadiifinta robot-sare uu aad uga sarreeyo qiimaha, runti ma u qalmaa?
Sida munaasabado kale oo badan, markan sidoo kale waxaan go'aansanay inaan ku darno fiidiyow falanqayntayada, kaliya waxaan go'aansanay inaan abuurno fiidiyow "gaar ah" kaas oo aad awood u yeelan doonto inaad aragto wax ka badan dib u eegista fudud, waxaad heli doontaa faahfaahin sax ah iyo macluumaad ku saabsan qaabeynta qalabka iyo waxyaabo kale oo badan. Si tan loo sameeyo, waa inaad kaliya ka ciyaartaa fiidiyaha halkaas oo aad ka heli doonto dhammaan macluumaadka ereyada aysan awoodin inay keligood horumariyaan. Qaado fursad aad ku qorto kanaalkayaga YouTube halkaas oo aad ka heli doontid waxyaabo badan oo naga caawin kara inaan sii wadno sii kordhitaanka
1 Naqshad: Sumadda guryaha
2 Faahfaahinta Farsamada: Waxba kama dhinna
3 Barnaamijka Roborock, qiime lagu daray
4 Hababka nadaafadda iyo xoqidda kala duwan
5 Dayactirka iyo ismaamulka
Naqshad: Sumadda guryaha
Roborock wuxuu ku hayaa sharad wax shaqeeya. Naqshadihiisa si fudud ayaa loo aqoonsan karaa taasna waxay ku kasbatay qanacsanaan badan oo ka mid ah adeegsadayaashiisa. iyo dabcan iibyo badan. Waxaa jira daabacaadyo badan oo leh naqshad aad u eg, oo leh soosaaraha dhexe ee sare, qalab gebi ahaanba wareegsan oo aad u dheer oo ay wehliyaan laba midab oo laga kala xusho, caddaan ama madow. Dabcan, sida had iyo jeer aan sharad on qalabka caag ah, saddex badhamada qaabeynta ee xarunta hore iyo Laydh is-dhexgal ah oo beddela midabkiisa iyadoo loo eegayo shaqada la metelay.
Waxyaabaha ku jira sanduuqa:
Cabirrada: 35,3 * 35 * 9,65 cm
Miisaanka: 4,7 Kg
Waxaan leenahay daboolka gadaashiisa markii kor loo qaadayo ay na tusayso taangiga adag iyo tilmaame WiFi ah. Qeybta hoose waxaan ku heynaa duubista caagga dhexe, soo saareheeda, wheel-ka indha la 'iyo hal "aruuriyaha", markan waxaa laga sameeyay silikoon. Taangiyada biyaha iyo isku hagaajinta suufka xoqida ayaa ku harsan xagga dambe. Naqshad la mid ah tan ilaa hadda la arkay, haa, halkan tayada hagaajinta iyo lQalabka, oo si dhakhso leh nooga dhigaya inaan ogaano inaan la macaamileyno badeecad qiimo sare leh. Kama helno baakadka, haa, nooc kasta oo beddelaad ah oo loogu talagalay qalabka nadaafadda.
Faahfaahinta Farsamada: Waxba kama dhinna
Waxaan si toos ah ugu tagnaa awoodda nuugista, mid ka mid ah qaybaha ugu go'aanka badan marka ay timaado kala soocida aaladda noocan ah. Wax aan ka yarayn 2.500 Pascals taasi waxay si dhakhso leh nooga dhigeysaa inaan ogaanno in Roborock S7 ay awood u yeelan doonto dhammaan noocyada wasakhda ah. Si aad u kaydiso waxa aad soo ururiso, waxay leedahay deebaaji dhan 470 mililitir taas oo laga soo saaray xagga sare oo leh a Filter HEPA la beddeli karo haddii loo baahdo.
Waxaan leenahay isku xirnaanta WiFi si aad u maamusho dalabkaaga, oo si buuxda ula jaan qaada Alexa, Siri iyo Kaaliyaha Google. Hadda oo aan ka hadleyno xoqitaanka ultrasonic, waxaan diiradda saareynaa xaqiiqda ah inaan haysanno lacag "300 keliya" oo mililitir ah, oo aan ka hadli doonno xiga. Waxaa muhiim ah in la sheego inay kaliya la jaan qaadi karto shabakadaha WiFi ee 2,4GHz si loo kordhiyo baaxadda hawlgalka.
Waxaan leenahay saldhig cadaalad ah oo sahlan oo caadi ah oo loogu talagalay nooca, leh tilmaame xaalad (LED) iyo fiilo isku xirnaanta korantada oo isku dheelitiran. Dabcan, uguyaraan qalabka wax lagu beddelo ayaa lagu dhex daray salka kaas oo bixiya waxqabad hufan oo hufan marka loo eego isticmaalka.
Barnaamijka Roborock, qiime lagu daray
Software waa qayb gaar ahaan muhiim ah. Qaabeynta bilowgeedu waa mid aad u fudud:
Degso barnaamijka (macruufka / Android)
Daar Roboorock S7
Riix labada badhan ee Roborock S7 illaa WiFi LED uu ka bidhaamayo (halka taangiga adag)
Ka raadi abka
Gali lambarka sirta ah ee shabakadda WiFi
Si toos ah ayuu u habeyn doonaa
Way fududahay in la helo Roborock S7 oo shaqeynaya. Fiidiyowgeena waxaad ku arki doontaa goobaha kala duwan iyo sidoo kale suurtagalnimada in luuqadda la beddelo, jadwalka waqtiyada nadiifinta iyo waxyaabo kaloo badan. Si kastaba ha noqotee, waxaa xusid mudan in codsigeedu uu noo oggolaan doono inaan maareyno khariidadaha gurigeenna, hagaajinno saddex heer oo ah awood faaruq ah, seddex kale oo ah awood xoqidda iyo xitaa inaan hagaajino meelaha aan dooneyno in lagu nadiifiyo.
Hababka nadaafadda iyo xoqidda kala duwan
Waxaan ku bilaabeynaa hammi, qaabka aan sida caadiga ah u isticmaali doonno oo u adeegsada dareemayaasha LiDAR ee kala duwan si ay uga faa'iideystaan ​​waxqabadka:
Habka aamusnaanta: Hab adeegsi oo hooseeya oo qalabka u keenaya saddex saacadood oo madax-bannaanid ah.
Habka caadiga ah: Habka u oggolaanaya aaladda inay si otomaatig ah u hagaajiso awoodda nuugista iyadoo lagu saleynayo ogaanshaha wasakhda iyo roogagga.
Habka Turbo: Wax aad u xoog badan oo buuq badan, gaar ahaan lagula taliyay markay jiraan wasakh iyo qashin waaweyn.
Habka ugu badan: Waxay isticmaashaa 2.500 Pa oo awood ah, aad u buuq badan waxaan dhihi karnaa xitaa xanaaq, haa, ma jiri doonto wasakh diidaysa.
Ku saabsan habdhaqanka Roborock S7 oo leh roogag Waxaan isku hagaajin karnaa inta udhaxeysa seddex ikhtiyaar oo kala duwan: Ka fogow; Garaacista iyo xoqida xoqida; Kordhi awoodda nuugista marka la ogaado. Marwalba waxaan sharad ku dhigaa nooca ugu dambeeya waxqabadkuna wuxuu ahaa mid gaar ah.
Fursado badan ayaa sidoo kale loogu talagalay xoqida ultrasonic taas oo si sax ah nooga yaabisay sida ay u shaqeyso. Si aad u badan oo aan ku talin lahayn xitaa parquet ama dabaqyo alwaax ah, wax khatar u ahaa qalab la mid ah ilaa hadda. Way gariiri doontaa iyadoo soo noqnoqota illaa 3000 jeer daqiiqaddii. Waxaas oo dhami wali way ka fog yihiin xoqitaanka gacanta marka la eego dabaqyada dhoobada, laakiin feker ahaanteyda waa ku filan tahay dayactirka maalinlaha ah ee sagxadda, haa, iska ilow xoqidda wasakhda caanka ah.
Xoqid Iftiin ah
Xoqid dhexdhexaad ah
Xoqid xoog leh
Waxay leedahay xayeysiis300 mililitir oo kayd ah taas oo aan dooneyno inaan ku xusuusino, kuma dari kartid alaabta nadiifinta, sumadda lafteedu waxay muujineysaa inay si xun u saameyn karto xoogga sheyga.
Dayactirka iyo ismaamulka
Sidaad ogtahayba, qalabkani wuxuu leeyahay tilmaame dayactir ah codsigiisa. Tan darteed waa inaan tixgelin siino taas Miiraha HEPA waa la dhaqi karaa iyo in aan u baahanahay in aan badalno inta badan alaabada la isticmaalo muddo ku dhow lix bilood. Si la mid ah, nadaafadda waxaa loo qorsheyn doonaa sida:
Burushka ugu weyn: Toddobaadle
Burushka dhinaca: Bil kasta
Filter HEPA: Labadii toddobaadba mar
Maro xoqan: Isticmaal kasta ka dib
Xiriirrada iyo dareemayaasha: Bille
Ku saabsan madax-bannaanida, Waxay ku kala duwanaan doontaa inta udhaxeysa 80 daqiiqo ilaa 180 daqiiqo iyadoo kuxiran tirada shaqooyinka, tani waxay kaa caawin doontaa inaad batroolka ka dhuujiso 5.200 Mah si ugu badnaan.
Sida iska cad Roborock S7 waxay fulisaa ku dhowaad wax kasta oo la ballanqaaday, wax laga filan karo wax soo saarka 549 (AliExpress). Xaaqintu wali way ka fogtahay xoqitaan dhaqameed riyooyin dhoobada ah, si kastaba ha noqotee, faaruqinta iyo hufnaanteeda oo ay weheliso codsi aad u adag ayaa wax badan ka caawinaya sidii uu u noqon lahaa mid ka mid ah nadiifiyeyaasha fayadhawrka robotka ah ee dhaliya qanacsanaanta ka badan madax xanuunka. Sida iska cad nama wajaheyno shey heer-gal ah, sidaa darteed helitaankiisu wuxuu u baahan doonaa miisaamida baahiyaheena.
Codsi wanaagsan oo dhameystiran
Awood nuugid sare iyo hufnaan nadiifin
Xaaqid ku filan dayactirka sariirtaada
Is-maamul ku filan guryaha 90 m2 Aprx.
Kuma jiraan waxyaabaha la isticmaalo ee baakadka ku jira
Mararka qaarkood ma dhaafo nusqaamaha cidhiidhiga ah
Dhawaaq aad u xoog badan oo ku socda awoodaha sare
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Roborock S7: Nadiifinta dhamaadka-sare hadda leh xoqida ultrasonic
Samsung Odyssey G7: Kormeere ciyaaraha oo aad u dhameystiran